Bonucci oo maasgaro ku ciyaaraya lugta 2-aad ee Italy vs Sweden – Gool FM
Bonucci oo maasgaro ku ciyaaraya lugta 2-aad ee Italy vs Sweden
Raage November 11, 2017
(Milano) 11 Nof 2017 – Sawirrada raajo laga qaaday daafaca Leonardo Bonucci ayaa muujinaya tarrar ka gaarey wejiga ka gaarey kaddib xusul uu ku dhuftay Ola Toivonen, balse weli wuu ciyaari karaa kulanka muhimka ah ee ay Isniinta lugta 2-aad ku wajahayaan isla Sweden.
Shilkan ayaa dhacay daqiiqadihii bilowga ee lugta hore oo ay xalay gool madi ahaa ku badisay kooxda Sweden oo Talyaaniga ku qaabishey xaafadda Solna, balse intaa ku ekaan mayso oo waxaa lagu ballansan yahay Milano.
Waloow uu Bonucci ciyaarta dhamaystay misna waxay raajadu muujinaysaa inuu sanka ka tarraray, waxaase loo badinayaa inuu dheeli doono isagoo xiran maasgaraha weji dhowrka ah, sida uu baahinayo Sky Sport Italia.
Lugta 2-aad ee ka dhacaysa San Siro ayaa waxaa ka maqnaan doona Marco Verratti oo jaalle ku qaatay ciyaartii xalaytoole, iyadoo ay howl adagi u taallo macallinka Talyaaniga oo ay eeda badani u yaallaan.
GOOGOOSKA: Spain vs Costa Rica 5-0 (Spain oo shan ku dhuftay Costa Rica)
"Aguero iyo Messi waa wadajir wanaagsan".